Chi-ojoo emegooro mmadu 60 n’Abijan
E Guzobela Maazị Dom Okafọr N'Ọkwa 'Patron' Nke Otu Jikọtara Ndi Leyiti n'Ala Anyị...
Dịka e kwuru na ọkwa dị oke elu bụ maka ndi nwere ùgwù na nsọpụrụ, a nọrọ nso a wee guzobe otu nwa amadi e jiri inyere ndị mmadụ aka wee mara, bụ Chiifu Dọm Okafọr n'ọkwa dịka 'Patron' nke òtù ahụ jikọtara ndị leyiti n'ala anyị, ngalàbà Dayọsiisi Awka.
Ndị Ntorobịa Ọmambala Erie Ji Ọhụụ...
Obodo juru nnọọ kpụmkpụm n'ọnụ ụbọchị..... dịka ndị ntorobịa Ọmambala zukọrọ ma nuputakwa n'ịgwè wee merùbe mmemme iri ji ọhụụ ha nke ahọ 2018.
Oke Ọñụ Adaa Dịka Dọm Okafọr Bunyere Ndị Ọlụsị Ígwè Na-Enye Ọkụ Latiriiki n'Awka...
Oke ọñụ dara nnọọ n'ogige Ọkammụta Dọra Akụnyịlị 'Women Development Centre' dị n'Awka, dịka otu nwoke e jiri inyere ụmụ mmadụ aka wee mara, ma bụrụkwa onye ọnọdụ ụmụ mmadụ na-emetụ n'obi, bụ maazị Dom Okafọr buyere ndị ọlụsị otu nnukwu ígwè na-enye ọkụ ka ha wee na-arụ ọrụ n'ebe ahụ.
Ìjú Etokpòlá 'Federal Poly, Oko'... ● Ndị Ndu Gwa Ụmụakwụkwọ Ka Ha Laa Ezumike Mberede...
Dịka ámụmá ahụ e buru na-abịa na mmezu ugbu a, ìjú mmiri awakpòla ma tokpòkwa ụlọ akwụkwọ 'Federal Poly Oko', ngalàbà ya nke dị n'Atànị n'okpuru ọchịchị Ọgbarụ nke steeti Anambra.
A Ga-Amàchi Ịhụta Mmadụ Dịka Òsú n'Ahọ a...
E meela ka a mara na ịkpọ ma ọ bụ ịhụta mmadụ dịka òsú n'ala Igbo ga-abịa n'isi njedobe n'ahọ a, ma bụrụkwa nke a ga-amàchi kpamkpam na mmemme Ilommụọ Ndị Igbo nke ahọ 2018, bụ nke ga-ewere ọnọdụ n'obi Eze Nri dị n'okpuru ọchịchị Anaọcha dị na steeti Anambra.
SEMA Na Ndị Ọrụ Agha Ala Anyị Ga-Ejikọ Aka Ibuso Ìjú Mmiri Agha n'Abambra...
Dịka a gara n'ihu na-ama ọkwa ma na-ebukwa amụma dị iche iche banyere mkpamkpa dị iche iche ìjú mmiri aghaghị ịkpa na steeti dị iche iche n'ahọ a, ndị ọrụ agha ala anyị ekwela nkwà ma kwupụta njikere ha ijikọ aka ọnụ, ha na ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọnọdụ mberede na steeti Anambra, bụ Anambra State Emergency Management Agency n'ibuso nsogbu iju mmiri agha na steeti ahụ.
A Ga-Arụchapụ Àkwà Mmiri Nengo Mgbe Adịghị Anya -- Ifejiọfọr...
E meela ka a mara na oge adịghị anya na ọrụ ga-akụrụ ọnụ n'àkwà mmiri Nengo ahụ a na-arụ na Nteje dị n'okpuru ọchịchị Oyi nke steeti Anambra.
Anambra Amàlite Ọrụ Mmetụaka n'Ụfọdụ Okporo Ụzọ Na Steeti Ahụ...
Dịka ihu malitegoro ịtọ eluigwe amụ nwa obere nwa obere ugbu a, ọchịchị steeti Anambra ábàgidela n'amụmà imetụgharịsị ụfọdụ okporo ụzọ dị ịche iche na steeti ahụ aka na idozigharịsị ebe ụfọdụ jọrọ njọ nke ukwu iji mee ka ha kwé ọgịga ma gharakwa imebiri gaa n'ihu.
A Kpọkuola Ndị Bi n'Akụkụ Ogbu Mmiri Ka Ha Kwagharịa Ọnọdụ...
N'ihi oke iju mmiri ahụ na-awakebe na steeti Anambra kwa ahọ ọbụla, a kpọkuola ndị niile bi na mpaghara ebe ndị ahụ iju mmiri na-agba ka ha were ehihe chụọ ewu ojii ugbu a site n'ịkwagharị ọnọdụ ha pụọ na mpaghara ebe ndị ahụ tupuu oge ya bụ mmiri ji awa eruo nso, bụ nke e kwuru na ọ ghaghị ịwakwa n'ahọ a.
Ịma Agụ Na Ịma Ede Dị Mma, Mana Ịmụta Ọrụ Aka Dịkwa Oke Mkpa -- Nkechi Udenze...
E meela ka a mara oke mkpa ọ dị, bụ mmadụ ịma agụ, ịma ede, nakwa ịmụta ọrụ aka dị iche iche, dịka ụwa na-atụgharịzị atụgharị ugbu a.
Ọnwụ ike egbuona ihe ruru mmadụ 60 n’obodo Abijan na mba Kotovua.
Ka a na-eme mmeme ịchụ afọ, igwe mmadụ gbakọtara na mpaghara obodo ahụ ebe a na-amụ ọkpụpka ọkụ fireworks. Onye mịnịsta n’ahụ maka ime obodo, bụ Hamed Bakayoko, kwuru na mmadụ 60 nwụrụ anwụ, ebe mmadụ 49 ndị ọzọ merụrụ ahụ.
Onye isi ala Kotovua, bụ Alassane Ouattara, ejego ebe ahụ ihe mberede a mere, kwee nkwa na ha ga-achọpụtarịrị otu ihe chi-ọjọọ ahụ siri mee.
Anyị nụtara na, ka a mụchara ọkpụkpa ọkụ fireworks ahụ, ndị mmadụ malitere ịlaghachi be ha ebe elekere mbụ nke isi ụtụtụ. Mmadụ karịrị akarị na Plateau, ebe e mere ihe nkiri ahụ. A malitere gbawa igidi, nke mere ndị mmadụ jiziri dagbuwe ibe ha. Ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ bụ ụmụ-nwanyị na ụmụ-aka.
Ndị Ụmụeri Ewere Ọñụ Rie Ji Ọhụụ...
Dịka a sị na ihe ọbụla nwere oge ya, ndị obodo Ụmụeri dị n'okpuru ọchịchị Anambra East nke steeti Anambra ewerela oke ọñụ merùbe mmemme iri ji ọhụụ nke ahọ 2018.
Chiifu Maja Umeh Emee Mmemme Iri Ji Ọhụụ...
Ịma mma nke ọnatarachi na omenala Igbo bụ nnọọ nke pụtara ihè n'isi ngwụcha izu ụka gara aga, dịka otu oke mmadụ e ji okwu ya agba izu ma bụrụkwa Kọmishiona steeti Anambra na-ahụ maka ozi na mgbasa ozi n'oge gara aga, bụ Chiifu Maja Umeh mere mmemme iri ji ọhụụ ya nke ahọ 2018.